नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथग्रहण बिहीबार हुने « Bagmati Page
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथग्रहण बिहीबार हुने
काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्रीहरुको बिहीबार सपथग्रहण हुने भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार बिहीबार सपथग्रहण गर्नेगरी तयारी थालिएको छ । यद्यपी समय भने तय भइसकेको छैन । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिट पार्टी (नेकपा) का महासचिव पौडेललाई सरकारको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम नियुक्ति गरेकी हुन् । यसअघि अर्थमन्त्री रहेका डा युवराज खतिवडा संवैधानिक रुपमा मन्त्रीमा रहिरन नमिल्ने भएपछि उनले राजीनामा दिएसँगै अर्थमन्त्रालय पद रिक्त रहँदै आएको थियो ।
यस्तै कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सहरी विकास मन्त्री बनेका छन् भने लिलानाथ श्रेष्ठ महिला बालबालिकामन्त्री बनेका छन् । यस्तै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस्तै यसअघि महिला बालबालिका मन्त्री रहेका पार्वत गुरुङले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । अन्य मन्त्रीहरुमा भने यसअघिकै यथावत रहेका छन् ।
एमालेकी युवा नेतृ अस्मिता थापा लिखु गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित
काठमाडौं । अनेरास्ववियु केन्द्रिय सचिवालय सदस्य अस्मिता थापा ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी छन्
सुनवल–१० मा एमालेका दिलबहादुर थापा सहितको प्यानल बिजयी
नवलपरासी । जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा नं १० मा नेकपा एमालेका वडाध्यक्ष सहित पुरै प्यानलले
नवराज भट्टराई नेतृत्वको टिम अत्याधिक मतले विजयी
काठमाडौं । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १० मा नेकपा एमालेका नवराज भट्टराई नेतृत्वको टिम अत्याधिक
काठमाडौं। वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. अभय यादवले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा आफ्नो विशेषज्ञ सेवा सुरु गरेका
बूढानीलकण्ठ–११ को अध्यक्षमा नेकपा एमालेका राजु अधिकारी विजयी